Wiko na-enye gam akporo abụọ ọzọ: Wiko Harry 2 na Wiko View 2 Plus | Gam akporosis
Manuel Ramirez | | IFA, Mobiles, Noticias
Dị French na-ere ya ma wetara anyị ugbu a ekwentị ọhụrụ gam akporo abụọ: Wiko View 2 Plus na Wiko Harry 2. Ọ bụ mmadụ ole na ole kwupụtara ọkwa Wiko View 2 Go, nke anyi na ekwu banyere ya site na usoro ndi a n'etiti anyi.
Ọ bụ na IFA ebe ọ gosipụtara ekwentị atọ nke na ntinye a anyị na-ekwu okwu abụọ ahụ. Smartphones ziri ezi nke ọma ma na ọnụahịa na ogo na nhazi nke ihe mejupụtara ya.
Wiko View 2 Plus bụ ọnụ na-abịa ịdị ka nwanne nwoke nke okenye nke Wiko View 2 Plus. Ọ na-abịa na 5,932-inch ihuenyo na mkpebi 19: 2 HD Plus, Qualcomm Snapdragon 450 asatọ isi processor na elekere ọsọ nke 1,8 Ghz na 4GB RAM.
Ma ọ bụ na-enweghị 64 GB nchekwa ebe nchekwa na batrị 4.000 mAh iji nye gị agha zuru oke n'ụbọchị. Igwefoto ahụ na-ejikwa aka iji gosipụta dual na azụ 12 MP + 12 MP, yana n'ihu nke ruru 8 megapixels.
El Wiko Harry 2 bụ nwanne nwoke nke nta na ihuenyo 5,43 nke anụ ọhịa 18: 9 HD +, Mediatek MT6739WA quad-core chip na 1,3 GHz na 2 GB nke RAM. N'ịbụ onye kasị nta n'ime atọ ahụ egosiri, a na-ahụkwa ya na nchekwa dị n'ime ya na 16GB ya (ya na nhọrọ microSD dị ka 2 Plus) na batrị nke na-anọ na 2.900mAh.
Enweghị ihu mkpọghe dị ka Wiko View 2 Plus, ọ bụ ezie na ọ nwere Dual SIM dịka nwanne ya nwoke nke okenye. Ha abụọ nwere gam akporo 8.1 Oreo iji chọta anyị ọnụahịa sitere na euro 99 maka Wiko Harry 2 na euro 199 maka Wiko View 2 Plus.
Ekwentị ọhụrụ abụọ sitere na Wiko French na-abata nke ọma na ọnụahịa na nkọwa. Akara nke na-ewere ọnọdụ ya igosipụta onwe ya dị ka otu n'ime ụlọ ọrụ Europe na-eduga.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ekwentị abụọ ọzọ sitere na akara French: Wiko View 2 Plus na Wiko Harry 2